ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 |3၏စာမျက်နှာ 48 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 3)
ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် - ထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးမှု
Verizon ကတည်နေရာ: San Jose, CA အမေရိကန်တာဝန်များ Tech မှ Analyst, - ထုတ်လုပ်မှု SupportPosition အနှစ်ချုပ် :. ဗီဒီယိုကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကိရိယာများ, Web ကိုန်ဆောင်မှုများ, VOD နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့် OTT ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ ... နောက်ထပ် >>
Fox ကရုပ်မြင်သံကြားစခန်းများတည်နေရာ: Austin TX အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏ ... နောက်ထပ်ထောက်ခံမှုအတွက်တီဗီဘူတာရုံတစ်လျှောက်လုံးကွန်ပျူတာ-based နှင့် IP-enabled ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းနည်းလိုအပ် >>
အွန်၏စီးတီး,, CA တည်နေရာ: အွန်, CA ကိုအမေရိကန် ... အင်ဂျင်နီယာများ, တိုင်း, developer များ, အခြားအများပြည်သူအေဂျင်စီန်ထမ်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အထွေထွေပြည်သူ့ပုဂ္ဂလိကဖို့စီးတီးတို့အတွက်ဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ more >>
Acadia ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတည်နေရာ: Franklin TN အမေရိကန်0ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်2နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံ။ ဒီအနေအထား >> ဗီဒီယို & အသံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း, ဓာတ်ပုံပညာ, နဲ့ ... ပိုကြီးကြပ်ကပါဝင်ပတ်သက်
axon NAB4မှာအိုင်ပီ & 2016K ဖြေရှင်းနည်းများ, Cerebrum ထိန်းချုပ်မှု & စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်အသစ်များကိုတိုးမြှင့်မှုများကိုရည်ညွှန်းပြသ
axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်း, signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဦးဆောင်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲစောင့်ကြည့် & ထိန်းချုပ်မှု၎င်း၏ Cerebrum ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပလက်ဖောင်းမှနောက်ဆုံးပေါ် updates များကိုမိတ်ဆက်နှင့်ယခုနှစ် NAB (ပြခန်း N4) မှာ 4524K နှင့် Ethernet ဟာအခြေခံအဆောက်အအုံဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Cerebrum ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းအသွားအလာ axon အစာရှောင်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာသော၎င်း၏ရေပန်းစား Cerebrum ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်၏သရုပ်ပြလိမ့်မယ်ရိုးရှင်းစွာ ...
ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင် / ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆိုတော် - Screen ကိုပုံနှိပ်
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပရင့်ထုတ်ရန်အဝတ်အစားတည်နေရာ: Lexington KY အမေရိကန် Illustrator နဲ့ Photoshop ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ Adobe Illustrator & Photoshop ကိုလိုအပ်ပါသည်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို :. မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ... နောက်ထပ် >>
ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ / ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ
Eriksen န်ဆောင်မှုများတည်နေရာ: တစ် DSLR ကင်မရာနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အတွေ့အကြုံကို * ပကတိဖြစ်ပါတယ်သုံးစွဲဖို့ Elizabethtown KY အမေရိကန်နိုင်ခြင်း။ Eriksen န်ဆောင်မှုများ >> အဘို့အ ... နောက်ထပ်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများစီမံခန့်ခွဲရန်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုရှာကြံနေသည်
Electronic Arts တို့တည်နေရာ: Austin TX အမေရိကန်စမ်းသပ်စီမံကိန်းများနှင့်လမ်းညွှန်များအတွက် QE အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်, ဗိသုကာနှင့်ကိရိယာများအပေါ်စမ်းသပ်မှုအင်ဂျင်နီယာများအကြံပေး ... ။ more >>